Saturday . 8 August . 2020
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဝက်တုပ်ကွေးပိုးသစ်တစ်မျိုး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက genotype4လို့ အမည်ပေးထားပြီး၊ G4 လို့လည်း အလွယ်ခေါ်ကြပါတယ်။ G4 ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ (၂၀၀၉)ခုနှစ်က လူပေါင်း (၂၈၄၀၀၀)ကို သေစေခဲ့တဲ့ H1N1 swine flu ကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
G4 ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကမ္ဘာကို လက်ရှိ ကပ်ရောဂါအသွင် ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ထက် ပိုပြီးဒုက္ခပေးသွားနိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သိပေးခဲ့ပါတယ်။ G4 ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူတွေရဲ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်းက ဆဲလ်တွေထဲမှာ ရှင်သန်နေနိုင်ပြီး သာမန်တုပ်ကွေရောဂါထက် အဆပေါင်းများစွာ ပြင်းထန်ပါတယ်။
(၂၀၁၁)နဲ့ (၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတွေအရ ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်သားတွေနဲ့၊ ဝက်သားထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံမှ လုပ်သားတွေမှာ ဒီရောဂါပိုး ကူးစက်ခဲ့ကြောင်း ပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတာက ဝက်တွေကနေ လူတွေကို ထိတွေ့ရင်း ရောဂါက အလွယ်တကူ ကူးနိုင်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးပိုးဟာ လူလူချင်းလည်း ကူးစက်နိုင်ပြီး၊ ရောဂါပိုးဟာ အဆုတ်၊ လည်ချောင်းနဲ့ လေပြွန်တစ်လျှောက်မှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ တွယ်နေနိုင်ပြီး၊ လူကို ဒုက္ခပေးမှာပါ။ သာမန်တုပ်ကွေးတွေနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာချင်း ဆင်တူနိုင်သော်လည်း၊ ရောဂါပြင်းအားက ပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရ သတင်းစာတွေကတော့ ကိုဗစ်-၁၉မှာ သတင်းတွေ ထိမ်ချန်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်း G4 ကို သိပ်အစိုးရိမ်မလွန်ကြဖို့ ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ အနောက်ဥရောပသတင်းတွေက စွပ်စွဲထားပါတယ်။ သုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ ဝက်သတ်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ လူ(၁၀)ဦးမှာ တစ်ဦးနှုန်း G4 ကူးစက်ခံရနိုင်ချေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ပြီး အသက်ပိုငယ်တဲ့လူငယ်ပိုင်းကို G4 က ဒုက္ခပိုပေးပြီး၊ လက်တလော ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရတော့ အသက် (၁၈)နှစ်ကနေ (၃၅)နှစ်အတွင်း လူငယ်ပိုင်း ကူးစက်မှုနှုန်းဟာ (၂၀.၅)%အထိ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကတော့ ဒီကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်နေပုံပါပဲ။
လင်းဇော်ကို (D Nae Khit)
မြန်မာအလုပ်သမလေး အမှု ထိုင်းအမျိုးသား ကို အမိန့်ချ
အိန္ဒိယမှာ အရက်ပုန်းသောက်ပြီး လူ ၉၀ နီးပါး သေဆုံး၊ လူ ၂ ဒါဇင်ကျော် ဖမ်းဆီးထား
ရုရှားနိုင်ငံတွင်၊ နှစ်ပတ်ထက် နောက်မကျဘဲ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိဟု သတင်းထွက်
ပိန်ဆေးနဲ့ အသားဖြူဆေးတွေသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးများအတွက် အန္တရာယ်ကျရောက်ပြီ